Wednesday March 20, 2019 - 14:18:10 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Waxaa sii kordhaya ciidanka Milatariga Soomaaliya ee kasoo baxaya aaga dagaalka kuwaa oo ka cabanaya in mudo bilooyin ah aysan qaadan mushaar sidoo kale laga jartay garaamkii ay lahaayeen.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ugu baaqay Madaxda Qaranka Soomaaliya in aan la siyaasadayn mushaarka ciidamada qalabka sida, lagana dhaafo ciidamada hadalada xaqiiqada ka fog ee warbaahinta loo marinayo.
Halkan ka Akhriso Qoraal uu Xildhibaanka Mushaar la’aanta ciidanka uga hadlay
Waxaan ugu baaqaynaa Madaxda Qaranka in aysan siyaasadayn mushaarka Ciidamada Qalabka Sida!
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Milateriga Soomaaliya ayaa ka soo baxay degmada Mahadaay, Qalimow, Garsaale iyo fariisimo ay ku lahaayeen duleedka Jowhar.
Soo bixitaanka Ciidamadaan ayaa lagu sababeeyay mushaar la’aan mudo 4 bilood ah soo jiitameysay, halka ciidamada qaarkood mudo 6 bilood ah aysan mushaar qaadan. Saraakiil katirsan ciidanka militariga oo aan la xariiray ayaa ii sheegay in ciidamadaan la diiwaan geliyay loona sheegay in mushaarka loogu soo shubi doono akoomadooda ilaa hadana aysan wax lacag ah qaadan.